Dhalinyarada Warshiikh oo xeebta kula ciyaaraya Dolphin: Video - iftineducation.com
Dhalinyarada Warshiikh oo xeebta kula ciyaaraya Dolphin: Video
iftineducation.com – Muuqaal laga soo duubay dhalinyaro Soomaaliyeed oo la ciyaaraya Xayawaanka badda laga helo oo lagu magacaabo “Badbaadiso” ama Dolphin ayaa lasoo dhigay baraha bulshada ay ku xiriirto ee Facebook iyo Youtube.
Dhalinyaradan oo ku sugan xeebta quruxda badan ee Warsheekh ayaa waxay la baashaalayaan Labo Dolphin ah oo xeebta ku sugan, iyagoo sawirro la gelaya iskana duubaya muuqaal. Waxaa maqleysaa dhawaaqa macaan ee ay bixinayaan Dolphineskan.
Waxaa dhif iyo naadif ah in la arko xayawaanka badbaadiso loo yaqaan ee Dolphin oo xeebaha Somalia ku sugan in si fudud loo arko, hase ahaatee Xeebta Warsheekh lagu arkay.
Xeebaha Somalia ayaa waxaa ku sugan maraakiib jilaaf ku sameeya kheyraadka baddeena, iyagoo wixii nacfi leh jilaabta, taasoo keentay in nabaad guur uu ku yimaado xayawaankii ku jiray baddaheena.
Daawo Madaxweyne Xasan oo Jabuuti kula kulmaya Axmed Siilaanyo